छोराको सुरक्षाकालागि किन यति धेरै चिन्तित ट्विंकल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
छोराको सुरक्षाकालागि किन यति धेरै चिन्तित ट्विंकल
एजेन्सी। केही समय अगाडि काजोलको एक फिल्म ‘हेलिकप्टर इला’ रिलीज भएको थियो। फिल्ममा यस्ती आमाको विषय देखाइएको थियो जो आफ्ना बच्चाप्रति धेरै पोजेटिभ थिइन्। उनी प्रत्येक समय आफ्ना बच्चाको आसपास मात्रै हुन्थिइन्।
उक्त फिल्मको कथाजस्तै बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार र उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना पनि यस्तै आमा बुवा हुन्। अक्षयका छोरा आरव बेलायतमा अध्ययन गर्छन्। ट्विंकल स्वयंले आफू बच्चामाथि निगरानी राख्ने आमा भएको प्रमाणित गरेकी छन्।
माथिको फोटो बेलायतको हो र यो फोटोमा आरवको थोरै अनुहार पनि देखिएको छ। पछाडि ठूलो भवनमा छ, जहाँ लेखिएको छ, ट्विंकल। यो फोटोसँगै ट्विंकलले लेखेकी छन्–एक राम्री भारतीय आमा आफ्नो छोराको जीवनमा सँगै बस्ने कोही न कोही तरिका निकाल्छिन्।’
ट्विकंलले आफ्नो छोरालाई धेरै नै सम्झना गरिरहेकी छन्। १४ सेप्टेम्बरमा आरवको जन्म दिनमा ट्विंकलले निकै भावुक ट्विट गरेकी थिइन्। उनले लेखेकी थिइन्–१५ औं जन्म दिनसँगै मनाएपछि यो पहिलो जन्म दिन हो अहिले हामी सँगै छैनौं। बर्थडे ब्वाई म तिमीलाई मिस गरिरहेकी छु।’
A good Indian mother always findsaway to be omnipresent in her precious beta’s life #NamasteBetaJi #England pic.twitter.com/hgodIwb84S
— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) November 4, 2018